'लाउन मन थ्यो जापानी सारी' र 'ए काजल' जस्ता गीत किन आउँछन् ट्रेन्डिङमा ?
अचेल गीतको लोकप्रियता ‘युट्युब भ्युज काउन्ट’, ‘ट्रेन्डिङ’ तथा सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ ले निर्धारण हुने गरेको छ। अर्को माध्यम ‘टिकटक’ पनि हो।
घत लाग्ने, सामाजिक परिवेशसँग मेल खाएको शब्द, मौलिकता मिसिएको संगीत, कर्णप्रिय गायन र वास्तविकतासँग नजिक भएको भिडियो लोकप्रिय हुन्छ।
नयाँ गीत केही समय ‘ट्रेन्डिङ’ मा रहेर हराउने गरेका छन्। यस्ता गीत तत्कालीन समय र परिवेशका लागि लोकप्रिय भएको मान्न सकिन्छ। तर कालजयी बन्छन् भन्ने छैन।
यतिबेला नेत्र अर्यालको शब्द र खेम सेन्चुरीको लयमा तयार भएको ‘सोचेझैँ जिन्दगी रैनछ’ तीज गीत लोकप्रिय बनिरहेको छ। मधु क्षेत्री र खेम सेन्चुरीकै स्वरमा रहेको यो गीत लामो समय युट्युब ट्रेन्डिङमा बस्यो भने टिकटकमा ३१ हजारभन्दा बढी प्रयोगकर्ताले यसको भिडियो बनाएका छन्।
लाउन मन थ्यो जापानी सारी,
बस्नुपर्यो मन मारी मारी
टेबुलमा काइँयो र ऐना छ,
सोचेझैँ जिन्दगी रैनछ।।
यो गीतले दुई साता अवधिमा युट्युटबमा १७ लाख बढी भ्युज पाइसकेको छ। सम्झिन, गुनगुनाउन र टिकटक बनाउनेका लागि अभिनय गर्न सजिलो र फरक यो गीतको विशेषता हो।
गायक खेम सेन्चुरीको अनुभवमा गीत लोकप्रिय बनाउन मौलिकतालाई जोड दिनुपर्छ। खेम भन्छन्, ‘मैले कुनै नयाँ प्रयोग गरेको होइन, तीजको मौलिक पक्ष समेट्ने कोसिस गरेको हुँ।’
उनको ‘सोचेझैँ जिन्दगी रैनछ’ कोरोनाको महामारीका कारण विकास भइरहेको मनोदशा र तीजको कारुणिक पाटोको प्रतिबिम्ब हो।
गीतमा भएका शब्द, लय र कोरियोग्राफी सबै कुराले साथ दिएको छ। यसमा लोकदोहोरी क्षेत्रकी चर्चित मोडल अञ्जली अधिकारीको अभिनय छ।
भिडियोका निर्देशक प्रकाश भट्टका अनुसार यो गीत चर्चित अनुहारका कारण मात्र नभई म्युजिक भिडियोमा प्रयोग गरिएको ‘डान्सिङ स्टेप’ ले पनि लोकप्रिय बनेको हो।
६–७ हजार म्युजिक भिडियो निर्देशन गरिसकेका भट्टको अनुभवमा ‘सोचेझैँ जिन्दगी रैनछ’ लाई नृत्यबाट प्रस्तुत गर्दा सिर्जित बिम्ब मन पराइएको हो।
अहिलेको अर्को लोकप्रिय गीत हो– निशान भट्टराई र एलिना चौहानको स्वरमा रहेको ‘के माया लाग्छ र?’
सवालजवाफ शैलीमा तयार गरिएको गीतले एउटा युगल जोडीको कथा बोकेको छ। भिडियो वर्षौंअघिको गाउँले परिवेश समेटेर तयार गरिएको छ। यसको पनि सबल पक्ष गीतको शैली, शब्द, चर्चित कलाकार र भिडियो हुन्।
मुकुन भुसाल र सुरबिना कार्कीको अभिनय रहेको भिडियो एकपटक हेर्दा दर्शकका आँखा अघाउँदैनन्। हर्क साउदले रचना गरेको गीतमा अंकित बाबु अधिकारीको संगीत छ। भिडियो आर्टमान्डुले तयार गरेको हो।
यस्तै फरक स्वादमा रहेको चक्र बमको ‘हिलवाला जुत्ती नला ए काजल’ पछिल्लो पटक चर्चाको शिखरमा पुग्न सफल भयो।
सुदूरपश्चिम क्षेत्रको ‘लवज’ र भाषा प्रयोग गरिएको गीतमा गढवाली संगीतको स्वाद मिश्रण गरिएको छ। गीतका सर्जक चक्र बमका अनुसार नेपालको सुदूरपश्चिममा गढवाली गीत पनि रुचाइन्छ। त्यसैले यो गीतमा त्यो स्वाद पस्किन खोजिएको हो। यो गीत सुदूरमा मात्र सीमित रहेन।
नेपालका सबैजसो भूभागबाट राम्रो प्रतिक्रिया पायो। चक्रको बुझाइमा यो गीतमा मुख्य रूपमा नयाँ ‘फ्लेबरको कम्पोजिसन’ ले काम गरेको छ।
चक्र आफैं सुदूरपश्चिमका लोकप्रिय गायक तथा मोडल हुन्। तेस्रो पक्षचाहिँ यसमा टिकटकबाट उदाएकी कलाकार गीता ढुंगानाको अभिनय छ। यो गीतले युट्युबमा ५० लाख हाराहारीमा भ्युज पाएको छ भने ७० हजार हाराहारीमा टिकटक बनेका छन्।
पछिल्लोपटक लामै समय युट्युब ट्रेन्डिङमा बस्न सफल गीत राजनराज शिवाकोटीले तयार गरेको ‘मायालु तिमी २’ ले ४० लाख भन्दा बढी युट्युब भ्युज पाएको छ। यो गीतमा पनि शब्दमा मौलिकता र सर्जकको लोकप्रियताले बढी काम गरेको छ।
गीतले युट्युबमा आफ्नो वर्चस्व जमाउन सफल हुनुको अर्को कारणचाहिँ भिडियोमा प्रयोग भएका नायकनायिकाको लोकप्रियता हो। भिडियो छायांकन गरिएको परिवेशले दर्शक श्रोतालाई झनै आकर्षित गर्न सफल भएको छ।
यो गीतको अर्को पक्ष पनि छ त्यो हो गीतको अंकुश (हुक)। यो गीतमा प्रयोग भएको हुक हो, ‘मायालु तिमी कता छौ’। ‘मायालु तिमी २’ मा यो हुकलाई ध्वनिबाट व्यक्त गरिएको छ र अघिल्लो गीतको यो चोइटो नै याद गर्न बाध्य पारिएको छ।
गीत लोकप्रिय हुन वा अहिलेको शब्दमा भाइरल हुन अथवा ट्रेन्डिङमा पर्नका लागि मुख्य रुपमा सिर्जना राम्रो हुनुपर्छ। गीतकार डा. कृष्णहरि बरालका अनुसार गीत लोकप्रिय हुन त्यसका शब्द ‘घत लाग्ने’ खालका हुनुपर्छ। घत लाग्ने शब्द भावनाको संवेगात्मक अभिव्यक्तिबाट आउँछन्।
बरालको बुझाइमा गीत लोकप्रिय बनाउने एउटा बलियो पक्ष हुक पनि हो। नेपाली गीतमा पनि हुकको प्रयोग हुन थालेको छ। जस्तो– डा. बरालकै ‘मैले त्यही भएर मन पराको’, ‘नाइँ नभन्नु ल’ गीतमा यी लाइन धेरै रुचाइए। यी हुक लाइन अर्थपूर्ण थिए। सम्झिन पनि सजिलो।
‘कतिपय अवस्थामा बाहिरबाट हेर्दा र यस्सो सुन्दा राम्रो लागे पनि भित्री पक्ष नराम्रो हुँदा गीत मन पराइँदैनन्। राम्रो फूल देखेर मौरी जान्छ तर त्यहाँ मह छैन भने अर्को पटक मौरी त्यसतर्फ जाँदैन’, गीतकार डा. बराल भन्छन्।
उनका अनुसार गीत लोकप्रियताको शिखरमा पुर्याउने अरु तत्त्व पनि छन्। ती हुन्, संगीतको धुन र वाद्यवादनको रूपरेखा अर्थात् ‘म्युजिक एरेन्ज’। कतिपय गीतका शब्द काव्यिक बन्न नसक्दा पनि सुमधुर धुनले सुनिरहुँ लाग्ने बनिदिन्छन्। यी सबै कुराको सम्मिश्रणले गीत लोकप्रियताको शिखर चढ्छन्, ट्रेन्डिङमा पर्छन्, भाइरल बन्छन्।
डा. बराल भन्छन्, ‘त्यस्ता शब्दमा यस्तो सत्य हुन्छ, जसले आन्तरिक सत्य पनि उद्घाटन गर्छ भने बाह्य सत्य अर्थात् वस्तुपरक सत्यलाई पनि भावनामा अभिव्यक्त गर्छ।’
याे पनि पढ्नुस् ः
गीतसंगीतमा व्यंग्य : कति पाच्य कति अपाच्य ?